အဘယ်အရာကိုက်ဘ် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူမှု Apps ကပ » အဘယ်အရာကိုက်ဘ်
အဘယ်အရာကို Web ကို APK ကို
ဒီ app ကိုဆေးကြောသန့်စင်ဖို့အကောင်းဆုံးနှင့်အစွမ်းထက် tool တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အရံသိမ်းဆည်းခံ ယူ. Whatsup မှတဆင့်မီဒီယာကိုစေလွှတ်ခြင်းနှင့်သင်တို့ကိုလည်းအတူတူပင် device အတွက်နှစ်ခုအကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
အဘယ်အရာကို Web ကို features တွေ
အဘယ်အရာကိုက်ဘ်: သင်ပြီးတော့ဒီ app အများအပြား devices များအတွက်တူညီသောကိရိယာသို့မဟုတ်တူညီသောအကောင့်နှစ်ခုအကောင့်ဖွင့်ချင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်သင်မျိုးစုံ device အတွက်တူညီသောအကောင့်ကိုသုံးနိုင်သည်။
အဘယ်အရာကို Web ကိုသင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းပေါ်မှာချက်တင် messenger ကိုလျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်စက်ကိရိယာနှင့်အခြားအကောင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သောအလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံး application ဖြစ်ပါတယ် !!!
အဘယ်အရာကို Cleaner:ဒီ app များ၏အရေးအပါဆုံးအင်္ဂါရပ်; သငျသညျအလိုအလျှောက်ပုံမှန်ကြားကာလများကတစ်ခုသို့မဟုတ်သိုလှောင်ရာနေရာကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုထံမှ Whatsup မီဒီယာ clean နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အဘယ်အရာကိုကို web သင်တစ်ဦးက high-quality ဒီဇိုင်းနှင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦး-ဖော်ရွေ interface ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
status Saver:လောလောဆယ် Whatsup ပေါ်တွင်သင်သာသင့်ရဲ့မိတျဆှေရဲ့ status ကို (ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယို) ရှုမြင်နိုင်ပေမယ့်သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုအတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်အဘယ်သူမျှမ option ကိုလည်းမရှိ။ ဒီ app ကိုသင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
Whatsup အသစ်က status ကိုအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူအားလုံး status ကိုအလိုအလျှောက် 24 နာရီအကြာတွင်ပျောက်ကွယ်သွား။ ဒါကြောင့်ငါတို့ app ကိုနှင့်အတူသင့်အကြိုက်ဆုံး status ကိုကယ်တင်နိုင်ပြီးအချိန်မရွေးသူတို့ကိုရယူနိုငျပါသညျ။
ဝဘ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသောအရာကိုနှင့်မ WhatsApp ကို Inc ကသူနဲ့ဆက်စပ်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက WhatsApp ကိုလျှောက်လွှာနှင့်မ: မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်
* ပိုပြီး feature ကို Add:
* အဘယ်အရာကို web ပြဿနာပြင်ဆင်ချက်
* အဘယ်အရာကိုသန့်စင်: စင်ကြယ်သောပို့ / မီဒီယာကိုလက်ခံရရှိ
* အခြေအနေ Saver: အခြားအသုံးပြုသူ status ကိုကယ်တင်
* app ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေမ
9.05 ကို MB